waxyaabaha la sameeyo - ALinks
Maqaallada ku saabsan waxyaabaha la sameeyo
Sidee shaqo looga raadsadaa Beijing?
Waxaa laga yaabaa 28, 2021 Antika Kumari shaqo, wax in la sameeyo, safarka, waxyaabo waxtar leh
Beijing waa caasimada Shiinaha iyo, layaab la'aan, waa magaalo leh rajo badan oo xirfadlayaal u leh dadka waddanka u dhashay iyo kuwii hore. Waqti sii qaado si aad wax uga barato suuqa shaqada ee magaalada iyo fursadaha beddelka xirfadeed ka hor intaadan u safrin Beijing oo aanad bilaabin
bushimaha ugufiican ee casiirka uk
April 15, 2021 Antika Kumari wax in la sameeyo, UK
Dibno beeyada ayaa ah liin dhogor leh oo aad ku darsato bushimahaaga si aad u qoyso una yareyso raaxo la'aanta bushimaha qallalan ama qallalan. Dibnaha ayaa si gaar ah ugu nugul qallalan maqaarka khafiifka ah awgood, waxayna caadi ahaan muujiyaan astaamo
Saliida ugu fiican ee bushimaha
April 15, 2021 Antika Kumari Hindiya, wax in la sameeyo
Nashqadeeyaha wejiga naqshadeeye ee khadka tooska ah ee Hindiya
Maaskarada waa in loo adeegsadaa qayb ka mid ah qorshaha guud ee waxqabadyada si looga hortago gudbinta COVID-19 iyo badbaadinta nolosha; xirashada maaskaro kaligeed ma bixin doonto difaac ku filan oo ka dhan ah COVID-19. Caafimaadkaaga ha ahaato haddii COVID-19 uu ku wareegayo xaafaddaada
Nalalka Daraasadda Ugu Fiican ee Ka Yar 1000
April 14, 2021 Shubham Sharma Hindiya, wax in la sameeyo, safarka
Nalalka miisku waa badeecad si ballaadhan loo isticmaalo waxaana la isticmaalayey ilaa qarnigii 19aad. Laydhka miiska waxaa loo isticmaali karaa siyaabo badan oo kala duwan sida Laydhka Daraasadda, Nalka Xafiiska, iyo qaar kaloo badan. Laydhka miiska daraasadda ayaa ah
Samsung Telefoonkiisa ugu Fiican Uk
April 12, 2021 Antika Kumari wax in la sameeyo, UK
Meelaha ugu wanaagsan ee lagu booqdo Boqortooyada Midowday.
November 17, 2020 Shubham Sharma wax in la sameeyo, UK
Boqortooyada Midowday (UK) waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago ee Yurub. Boqortooyada Midowday (UK) waxay ka kooban tahay England, Scotland, Wales, iyo Northern Ireland. Waxaa jira meelo badan oo meelo xiiso leh laga baarto gudaha Uk. Laga soo bilaabo kala duwanaanta dhaqanka ilaa afka
14 goobo dalxiis oo Uzbekistan ah
November 15, 2020 Maitri Jha wax in la sameeyo, Uzbekistan
Soojiidashada Dalxiiska ee Uzbekistan Uzbekistan waa jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeeti iyo waddan Aasiya ah. Waxay caan ku tahay masaajidyada iyo masaajidyada. Waxay leedahay goobo la xiriira Jidka Xariiriga ah, oo ah marinkii ganacsi ee Shiinaha iyo Mediterranean-ka qadiimiga ahaa. Calaamad Islaami ah
Waxyaabaha lagu sameeyo Cabo San Lucas
October 30, 2020 Antika Kumari Mexico, wax in la sameeyo
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku yaal Cabo San Lucas. Qofna kuma caajisto Cabo San maadaama aysan jirin waqti ku filan oo lagu baadho mid kasta iyo wax kasta oo Lucas ah. Hubso inaad hayso macluumaad waxtar leh oo ku saabsan meesha iyo
1 2 3 ... 5 Xogta ku xiga»